Lenovo Z5 dia amidy tamin'ny andro voalohany amidy any Sina | Androidsis
Ny Lenovo Z5 dia amidy ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fandefasana azy any Shina
Eder Ferreño | | Android Android, Lenovo, Finday
Herinandro lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Lenovo Z5, ny sainam-bolan'ny mpanamboatra sinoa vaovao. Finday iray izay nampanantena zavatra betsaka mifototra amin'ny sarisariny, fa taorian'ny fampisehoana azy dia nandiso fanantenana ilay fahatsapana ankapobeny. Ny fitsapana asidra dia ny fanombohany teny an-tsena, izay natao ny 12 Jona tany Sina. Ary toa nandalo ilay fitsapana.
satria ny Lenovo Z5 dia namidy tamin'ny andro voalohany amidy ao Shina. Nahavita an'io ihany koa izy tao anatin'ny minitra vitsy monja. Noho izany dia toa miteraka fahalianana amin'ny firenena ny fitaovan'ny mpanamboatra. Manampy ihany koa ny vidiny ambany, 172 euro fotsiny hanovana.
Natomboka tao amin'ny magazay malaza JD.com ny telefaona. Ary amin'ity andro voalohany amidy ity, lasa telefaona be mpivarotra ao amin'ny magazay. Ka ny varotra an'ity Lenovo Z5 ity dia tena tsara tokoa. Na dia, farafaharatsiny aloha hatreto, tsy mbola nisy tarehimarika momba ny varotra azo.
Amin'izany fomba izany, Nihoatra ny telefaona hafa toy ny Xiaomi Mi 12 na iPhone X amidy amin'ny talata 8 jona io. Vokatra tena tsara ho an'ny mpanamboatra, izay te-hanamboatra toerana very eo amin'ny tsena anatiny. Ity fitaovana ity dia mety ho tena manampy amin'io lafiny io.
Toa tsy nisy fiatraikany tamin'ny varotra nataony ny fampahalalana ratsy nataon'ny orinasa, izay nahatonga ny fahadisoam-panantenan'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana. Ny Lenovo Z5 dia manome lanja lehibe amin'ny vola, izay mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny maro.
Amin'izao fotoana izao dia alefa eny an-tsena any Sina ny telefaona. Tsy fantatra ny fotoana hahatongavany any amin'ny firenen-kafa, raha handefa azy ireo izy ireo. Ka tsy maintsy hiandry kely isika. Mahaliana ny mahita raha mahavita manaraka ny varotra tsara eny an-tsena amin'ny herinandro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Lenovo Z5 dia amidy ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fandefasana azy any Shina
Ny maody maizina dia ho tonga amin'ny Android miaraka amin'ny fanavaozana ho avy
Ny fanavaozana Samsung Galaxy S7 sy S7 Edge ho an'ny Android 8.0 Oreo any Espana